HIM | Health in Myanmar » 2010 » January
First 11 ဂျာနယ်ပါ လိင်တူဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်းပါးအား ပြန်လည်ချေပချက်
လိင်တူချင်းဆက်ဆံမှုများက စိတ်ဓါတ်ရေးရာနှင့် ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်သည့်အပြင် မှုခင်းဖြစ်စဉ်များကိုပါ အားပေးရာရောက်ဆိုသည့် First 11 ဂျာနယ်တွင် တင်ပြထားသော ဆောင်းပါးအပေါ် လိင်တူချစ်သူများ အခွင့်အရေးရှုထောင့်မှ ပြန်လည်သုံးသပ်ထားသည့် ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။
UNODC report on opiates 2009
Attached is the UNODC annual report on poppy and opiates. Production figures from Myanmar have not changed since the days of Khin Nyunt in 2004.
HIV မှတ်စုများ ၂၀၀၄ (Ebook)
ဒေါက်တာသီဟ ရေးသားသော HIV မှတ်စုများ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ထုတ် စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုဒ် ရယူ ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
UNAIDS sponsored paper on political dilemmas
Here isaUNAIDS-sponsored paper on political dilemmas on the HIV response in the country.
EC support to UNOPS in 2008
Here is the EC document outlining UNOPS support in 2008.
HIV မှတ်စုများ ၂၀၀၃ ( Ebook)
ဒေါက်တာသီဟ ရေးသားသော HIV မှတ်စုများ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ထုတ် စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုဒ် ရယူ ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
Here is someone writing inalocal language. Check it out. Can someone tell the moderator what it means?
HIV/AIDS ကုသရေး လမ်းညွှန်သစ်
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO က နောက်ဆုံးရသတင်း အချက်အလက်တွေကို အခြေခံပြီး အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဆေးဝါးများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြံပြုချက်ကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံး လမ်းညွှန်ချက်အရ ပိုးရှိသူတွေနဲ့ ပိုးရှိတဲ့နို့တိုက်မိခင်တွေကို စောနိုင်သမျှစောစော ဆေးပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဘဝဆိုတာ တချိန်တော့ ထားခဲ့ရမှာပဲလေ။ ဒီရောဂါပိုးရှိမှ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုကျန်တဲ့ ဘဝလေးကို လူတွေကို ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ သဘောထားရှိဖို့ပါပဲ”
ဤစကားကို ကိုယ်တိုင်က HIV ပိုး သယ်ဆောင်သူ ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့တိုင် ကျန်းမာ သန်စွမ်းနေသည့် ၃၅ နှစ်အရွယ် ကိုမျိုးသန့် (အမည်ပြောင်း)က ခွန်အားပါသည့် အသံဖြင့် ပြောဆို လိုက်သည်။
A stronghold in Rangoon
A Chinese newspaper is trying to find its niche in reporting on social affairs in the region. This isagood attempt.